Wasiirka tacliinta oo sheegay inay khasab tahay in la raaco amarrada lagu xakameynaya COVID19 – Radio Damal
Wasiirka tacliinta oo sheegay inay khasab tahay in la raaco amarrada lagu xakameynaya COVID19
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Prof. George Magoha ayaa sheegay in ardayda qaar ay maanta dib ugu laabteen dugsiyada.
Waxaa casharadooda dib u billowday ardayda fasalladda afaraad iyo sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa dhigta fasalka afaraad ee dugsiyada sare.
Hasa ahaate waxaa soo baxaya warar sheegaya inay jiraan arday aan maanta fasallada iska xaadirin maadaama ay walaac ka qabaan badqabkooda.
Prof. Magoha ayaa xilli uu tagay dugsiyo ku yaalla deegaanka Kibera ee ismaamulka Nairobi sheegay in macallimiinta laga doonayo inay xaqiijiyaan badqabka ardayda iyo inay xiran yihiin maaskaro.
Wasiir Magoha ayaa dhanka kale maanta waalidiinta carruurta fasallada kale oo aan wali dib ugu laaban dugsiyada kula taliyay inay u diyaar garoobaan dib ugu laabashada goobaha waxbarasho hal ama laba toddobaad gudahood.
Waxaa uu hoosta ka xarriiqay in wasaaradiisa ay kormeeri doonta dugsiyada islamarkaana ay hal ama laba toddobaad qiimeyn doonta kaddibna ay go’aamin doonto in ardayda fasallada kale ay dib ugu laaban karaa xarumaha waxbarasho iyo in kale.
Wuxuu sidoo kale waalidiinta ku booriyay inaysan ka walwalin carruurtooda oo ay joojiyaan fikradaha khaldan isagoo kula taliyay inay joojiyaan booqashada iskuulada haddii aysan jirin xaalad deg deg ah.
Waalidiinta ayuu wasiirka ka codsaday in haddii ubadkooda ay qabaan xaalado daba dheeraaday ay ku wargaliyaan maamulada iskuulada.
Maamullada dugsiyada ayuu ku booriyay inay sameyaan guddi gaar oo ka hortagga saameynta cudurka -19 si looga fogaado isu imaatinka ardayda iyo shirarka macalimiinta.
Waxaa uu ku amray inay diyaariyaan liiska ardayda qabo xanuunada gaarka ah ee u nugul coronavirus.
Prof .Magoha ayaa sido kale ku baaqay in gabdhaha uurka qaaday xilligii goobaha taclinta xirnayeen inay dib u bilaabaan waxbarashadooda.
Wasiirka ayaa dhanka kale maamulayaasha dugsiyada jiifka ama boodhinka ka codsaday inay xaqiijiyaan in ardayda laga dirin iskuulka sababo la xiriira lacagta fiiska kuwa sida gaarka loo leeyahay ama kuwa dowliga ah.
Goobaha waxbarashada ee sida gaarka ah loo leeyahay ayuu ka codsaday inaysan takoorin ardayda qaar ee aan ka qaybgalin casharrada ay ku bixinayeen qaab online ah.
Wasiirka ayaa sheegay in casharrada laga sii wadaya halkii lagu joojiyay bishii Maarso ee sannadkan xilligaas oo goobaha waxbrashada albaabada la isugu laabay si looga hortagga faafitaanka cudurka Coronavirus.
Madaxa wasaaradda tacliinta ee dalka ayaa sheegay in kastoo ay adagtahay xaqiijinta kala fogaanta ardayda haddana aan tani awgeed carruurta looga hor istaagi Karin inay dugsiyada ku laabtaan.
Xoghayaha wasaaradda waxbarashada ee dalka Dr. Belio Kipsang ayaa dhankiisa xusay inay Khasab tahay in dhammaan macallimiinta iyo ardayda ay isticmaalaan maaskaro .
Prof. George Magoha, wasiirka wasaaradda tacliinta ayaa sheegay in dowladda ay si lacag la’aan ah maaskaro ugu qaybin doonto keliya ardayda ka soo jeedo qoysaska danyarta ah.
Waxaa uu hay’adaha kala duwan ka codsaday inay gacan ka gaystaan sidii qaybaha dugsiyada ee maanta dib u furmay loo gaarsiin lahaa maaskaro ku filan.
Dugsiyada maanta dib loo furay ayaa la xiri doonaa 23-ka bisha Diseembar ee sanadkan.